Chili Piper: Kugadzirisazve Yako Yekutengesa Chikwata Kuronga, Karenda, Uye Inbox | Martech Zone
Chili Piper inogadziriswa yekugadzirisa mhinduro iyo inokutendera iwe ipapo kukodzera, nzira, uye bhuku rekutengesa misangano ine inbound inotungamira iyo nguva yavanoshandura pawebhusaiti yako.
Sei Chili Piper Anobatsira Kutengesa Matimu
Hapasisina kuvhiringidzika kwekutungamira kwekuparadzira maspredishiti, hapasisina maemail ekudzokera-uye-mberi uye mavoicemails kungo gadzirira musangano, uye hapasisina mikana yakarasika nekuda kwekunonoka kutevera.
Chili Piper Zvimiro Zvinosanganisira
Chili Piper inopa yako tarisiro ine irinani kuronga chiitiko kune yega yega inoshandura yakawanda inotungamira mumisangano inokodzera.
Pakarepo batanidza ne inbound zvinotungamira - Concierge inobvumira yako tarisiro kuronga misangano kana kutanga mhenyu kufona nekukurumidza mushure mekuendesa fomu rewebhu. Taura zvakanaka kune akarasika mikana yekutengesa. Dzokorora kumhanya kwako kutungamira nekubatanidza reps nevatengi vanokodzera iyo nguva yavanorovera vatumire pawebhu fomu yako.
Bhucha misangano chero kwaunoshanda - Uine Instant Booker, ako reps anogona kubhuka misangano uye handoff kufona mumasekondi pasina kuita switch skrini.
Imwe-tinya kubhuka pamusoro email - Deredza kudzvanya uye kuronga misangano nekukurumidza. Simbisa kuwanikwa kwako chaiko muemail yako uye rega tarisiro yebhuku nekudzvanya kamwe.
Real-nguva mafoni uye vhidhiyo yekutaura - Iko hakuna chinoratidza chiri nani cheye inotungamira inotungamira pane mumwe munhu akagadzirira kutaura izvozvi. Ipa tarisiro sarudzo yekutanga mhenyu foni kana vhidhiyo kufona chaipo pawebhusaiti yako.
Govera misangano kune chaiyo rep munguva chaiyo-nguva - Nenjere nzira, misangano inorongedzwa otomatiki nenhengo chaiyo yeboka rako rekutengesa, zvichikubvumidza iwe kugovera zvinotungamira nenzira kwayo uye kubvisa maspredishiti.
Kodzera, nzira, uye bhuku mune kamwe chete kubaya - Automated lead routing inovimbisa kuti tarisiro inokodzera yakarongedzwa neiyo chaiyo rep munguva chaiyo-nguva. Shandisa iro ruzivo rwunounganidzwa kuburikidza neyako webhu fomu kuti uwane inbound inotungamira mune chaiyo-nguva uye uvaendese kune chaiyo yekutengesa rep.
Kutenderera robin nzira - Ita shuwa kutungamira kwakaringana kwekutungamira nekuzvitenderedza bhasikoro kuburikidza neboka revatengesi reps chero musangano mutsva wapuwa.
Nyora kubatana kwese mu Salesforce - Chili Piper inongotakura zviitiko ku Salesforce. Ese manotsi, marongero, uye ruzivo rwemisangano zvakatemwa nguva uye zvakanyorwa kuti zvikubatsire zvirinani kugadzirisa pombi yako.
Pima uye gadziridza misangano yekutendeuka - Teedzera nhanho dzese dzemuitiro wemusangano, kusanganisira kubhuka, misangano yakaitwa, isina-mashoo, mareti, uye kukanzura. Gadzira mishumo mu Salesforce kuti unzwisise zvirinani uye gadzirisa yako inbound lead kutendeuka.
Chili Piper inosangana neyako yaunofarira kushambadzira uye kutengesa otomatiki software - inosanganisira Salesforce Pardot, Hubspot, Marketo, Salesforce, Eloqua, Twilio, Zapier, Intercom, GoToMeeting, uye Zoom.
Saina Kuti Chili Piper Yemahara
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Chili Piper.
Tags: chili pipereloquahubspotIntercommarketokalendari yekutengesayekutengesa kufona rekodhakutengesa kufona kurekodhayekutengesa musangano kurongamisangano yekutengesakutengesa nzirakutengesa vhidhiyo kutaurasalesforcemutengesi pardotTwiliozapperZoom